Abaholi bendabuko bathukuthele ngesinyathelo sokunquma imikhuba yokusoka | Scrolla Izindaba
Abaholi bendabuko bathukuthele ngesinyathelo sokunquma imikhuba yokusoka
Umjikelezo awupheli. Minyaka yonke abafana baya entabeni bayoba ngamadoda.
Iningi labo libuya nezinkumbulo ezifanele impilo yonke ngomkhuba onzima kodwa okhazimulayo wokuhamba.
Abanye babuya sebenesibazi sempilo ezithweni zabo zangasese ezicwiyiwe futhi bengakwazi ukusebenza njengamadoda impilo yabo yonke. Ebusika abaningi babulawa ukuchayeka, ehlobo abaningi babulawa ukoma.
Umthetho uhlale usabisa ngokujezisa kanzima ingcibi engekho emthethweni (odokotela abahlinzayo bendabuko). Izikole zokusoka ezisemthethweni zihlezi zisola izikole ezingekho emthethweni ngezinhlekelele. Futhi akekho noyedwa umuntu oshushiswayo.
Kepha kulo nyaka, i-Covid-19 ikunqabelile ukusoka kwasentabeni.
I-Congress of Traditional Leaders of South Africa (Contralesa) e-Eastern Cape ifuna uNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezendabuko uNgqongqoshe uNkosazana Dlamini-Zuma nephini lakhe uObed Bapela bavumele isikhathi sokusoka ehlobo siqhubeke ukuze kuvinjelwe izikole zokusoka ezingekho emthethweni. .
Ngomkhulumeli wesifundazwe, uMamkeli Ngam, i-Cogta i-khiphe izibalo kwabakwa-Scrolla.Africa.
Kutakulwe ababeyosoka abangama-38 ezikoleni ezingekho emthethweni kusukela ngenyanga edlule; bangama-28 kuMasipala wase-Buffalo City
Kuboshwe odokotela abahlinzayo bendabuko ababili nabazali ababili.
Kwavulwa amacala okusoka ayi-13 ngokungemthetho evulelwa izingcibi ezine ezidume kabi elokishini laseNompumelolo e-East London
Kutakulwe ababeyothwasa abayi-10 kwathi oyedwa washona Enyandeni kuMasipala wase-OR Tambo
Kodwa uhulumeni umile kwelokuthi ngenxa yalolu bhubhane, izikole ngeke zivunyelwe ukuvula.
Usihlalo we-Chief Mwelo Nonkonyana esifundazweni sase-Contralesa uthukuthele ugane unwabu ngalesi sinqumo. “UNgqongqoshe uDlamini-Zuma nephini lakhe u-Obed Bapela kumele bayeke ukudlala ngathi,” uyasho.
“Senze isethembiso kubazali nakumadodana abo ukuthi ngemuva kokubonisana nohulumeni ukusoka kuzoqhubeka.”
Uthe abaqondi ukuthi uhulumeni angawavumela kanjani amashibhini Kanye nezikole ukuba zivulwe kodwa enqaba ukuvula izikole zendabuko.
Zombili lezi zindawo i-Nelson Mandela Bay ne-Sarah Baartman District kuyizindawo lapho okudlange kakhulu i-Covid-19 kanti futhi ziyizizindawo lapho okusolwa khona.
“Kumele kubhekwe kakhulu izindawo ezidla ubhedu kuvunyelwe ezinye izifunda ukuthi ziqhubeke,” kusho uNonkonyana.
“Sisalela emuva futhi sizolwa kuze kube wukuthi uhulumeni uvumela ukusoka ehlobo.”
Ihhovisi lePhini likaNgqongqoshe uBapela likhiphe isitatimende kwabezindaba mhla zingama-22 kuLwezi liqinisekisa ukumiswa okwesikhashana kokusoka ezweni kuze kube kufika esinye isaziso futhi laxwayisa ngokuthi labo abangathobeli umthetho bazobekwa amacala okwephula umthetho i-Disaster Management Act.
UMvusiwekhaya Sicwetsga Okhulumela uNdunankulu uOscar Mabuyane uthe basibonile isimemezelo sabaholi bendabuko abathe bazoqhubeka nolwaluko.
“Sikhumbuza abantu besifundazwe sethu ukuthi ulwaluko luhlala lumisiwe kuze kube kukhishwa esinye isikhathi,” kusho uSicwetsha.
“Labo bantu abaphula umthetho bazoshushiswa.”